Kupisa kutengesa yakaderera mutengo OL bhegi yakasarudzika 4 ruvara 3-chidimbu seti waini pu yeganda vakadzi tote ruoko bhegi
Yakakwirira Chitsitsinho Shangu
2021 fashoni shangu dzakakwirira chitsitsinho
Muchinjikwa muviri 2020 Autumn Nguva yechando PU Leather F ...
Hot kutengesa yakaderera mutengo OL bhegi yakasarudzika 4 col ...
2019 New Kusvika American Vintage Christma ...
Xinzi Mvura Nyowani Dhizaini Yakanaka Vakadzi Ladi ...
Nyowani Model Vakadzi Zhizha Korea Sexy Yakakwira Iye ...
Xinzi Mvura Yakakwira-chitsitsinho Sandals KunzeTrad ...
Zvishongo-zvakavezwa pombi dzaive dzakakura nzira yekumhanya, uye isu tinoda kuti ruzivo rwunoita sei pachimiro ichi. Yakagadzirwa nechinongedzo chigunwe uye yakatetepa yakafukidzwa chitsitsinho, iyo pombi inotsanangurwa pabenduru ine yakashata curb-cheni tambo.
Model Nhamba: FTJ-688-18
Main Nyaya: PU chakaita zvokugadzirwa Leather
Ruvara: Dzvuku / Dema / Pingi / Grey / Denga Bhuruu / Navy Bhuruu
Saizi: 34 * 10 * 26CM + 16 * 15CM + 11 * 12CM Three-chidimbu yakatarwa
Basa: Zororo Rekare
Maitiro uye Packaging
Yakagadziriswa masevhisi uye mhinduro.
OEM & ODM BASA
Iye zvino kambani iri kuwedzera nesimba misika yemhiri kwemakungwa uye kurongeka kwepasirese uye isu takazvipira kuve Chengdu vakadzi shangu dzinotengesa kunze mabhizimusi gumi ane basa rehunhu hwemhando yepamusoro hwevakadzi shangu kune nyika mune ramangwana makore matatu.
Pashure: 2020 Nyowani Kusvika kweAmerican Vintage Kisimusi Elk Butterfly Yakashongedzwa Yakakurumbira Brand Luxury Mabhegi Vakadzi Ladies Dhizaina Hombodo
Zvadaro: Muchinjikwa muviri 2020 Autumn Nguva yechando PU Leather Mufashoni Argyle Bhegi Bhegi Yekunakidzwa Messenger Mabhegi Bhegi reMunhu neMink Fur.
Q1: Iwe uri mugadziri kana kambani yekutengesa?
Isu tiri mugadziri weshangu dzevakadzi ane anopfuura makore gumi nemana ehunyanzvi ruzivo.
Q2: Unogona kuita dhizaini kwatiri?
Ehe, isu tine nyanzvi dhizaini & technic timu ine hupfumi ruzivo mukuvandudza, takaita mirairo yakawanda yevatengi vedu nezvinodiwa zvavo.
Q3: Zvakadii nezve yako yekambani kudzora mhando?
Tine nyanzvi QA & QC timu uye tichanyatso kuteedzera iwo maodha kubva pakutanga chaiko kusvika kumagumo, sekutarisa izvo zvinyorwa, kutarisa kugadzirwa, kuona-kutarisa zvinhu zvakapedzwa, kusimbisa kurongedza, ect. Isu tinogamuchirawo yechitatu-bato kambani yakatarwa newe kuti nyatsoongorora yako mirairo.
Q4: Ndeipi MOQ yako yezvigadzirwa?
Iyo yakajairwa MOQ i12 mapara.
Q5: Zvakadii nezve inotungamira nguva yekugadzira yakawanda?
Kutendeseka, zvinoenderana nemabatiro uye kuwanda kwehuwandu, nepo, kazhinji, nguva yekutungamira yeMOQ yekuraira ichave mazuva 15-45 mushure mekubhadharwa.
Q6: Ndingaitenda sei kuti mushure mekubhadhara unogona kutumira zvinhu kwandiri?
Iwe zvechokwadi haufanirwe kunetseka nezvazvo. Isu tiri vakatendeka uye vakavimbika mutengesi. Chekutanga pane zvese, tiri kuita bhizinesi paAlibaba.com, kana isu tisina kutumira zvinhu kunze mushure mekugamuchira mubhadharo, unogona kuita chichemo paAlibaba.com uye ipapo Alibaba.com ichakutongera. Kunze kwezvo, isu tiri nhengo yeAlibaba.com Trade Assurance neUS 68,000 garandi, Alibaba.com ichavimbisa yako yese yekubhadhara.
Mugadziri Hombodo Dzakakurumbira Mhando
Fashoni yakakura kukosha kwechokwadi yeganda inopenya chibooreso ...
Yakaderera mutengo wepakati chitsitsinho ibvi rakakwirira vakadzi shangu shangu ...
Shangu inogadzira tsika logo yakagamuchirwa tsika h ...
Nyowani Model Vakadzi Zhizha Korea Sexy Yakakwira Chitsitsinho Sh ...
Yese-mechi nousimbe yakajeka shangu
2021 Tsika Patent Fashoni Dhizaina Vakadzi Womens P ...
Isu tinoedza kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Kumbira Ruzivo, Muenzaniso & Quote, Taura nesu!
Kero: HERE. 369, Fuling Road, Jiaolong Port, Shuangliu Dunhu, Chengdu Guta, Sichuan, China